မြန်မာနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း၊သံဃာများထဲတွင်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » မြန်မာနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း၊သံဃာများထဲတွင်….
- sai saimg
Posted by sai saimg on Feb 23, 2014 in Cover Faces, Creative Writing, Members, Myanma News, Myanmar Gazette, News |6comments
မြန်မာနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း၊သံဃာများထဲတွင် အဓမ္မ၀ါဒီများနှင့် အ၀ိနယ၀ါဒီများလွမ်းမိုးနေသူများများပြားနေသဖြင့်ကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်ရန်နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာဝန်ဆောင်မှုအစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိဆရာတော်မှမိန့်ဆိုညွန်ကြား.
သတ္တမအကြိမ်ကျင်းပသောနိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာဝန်ဆောင်မှုအထူးအစည်းအ ဝေးတွင် သဘာပတိဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒ န္တကုမာရဘိဝံသဆရာတော်မှ အထူး
လျှောက်ထားလိုက်ပါသည်။ ထိုသတင်းကို ၂၂-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့သတင်းစာတွင်ဖေါ်
သောပြဿနာများတွင် ၉၆၉ ဘုန်းကြီးများနှင့် ဝီရသူကဲ့သို့သော အစွန်းရောက် အားဓမ္မ၀ါဒီဘုန်းကြီးများက အမျိုးချစ်သယောင်ဖြင့် အ၀ိနယ၊ အာဓမ္မတရားများကို
မသိနားမလည်သောပြည်သူလူထုအားသွေးခွဲဟောပြောကာအခြားဘာသာဝင်များအ ပေါ်ရန်လို့မုန်းတီးစေခဲ့သောသမိုင်းဆိုးကြီးကို ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ကသိရှိပြီး
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲ အောင်ထိုကဲ့သို့ဘုန်းကြီးများကအစွန်းရောက်တရားပွဲများ၊ဗီဒီယိုတိပ်ခွေများဖြင့်သွေး ထိုးခြင်းလှုံဆော်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသဖြင့်တသက်လုံးအတူတကွနေထိုင်လာ ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြကာ မုန်းတီရေး တရားများကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြလုပ်ဟောပြောခဲ့ကြပြီး ထိုသည်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကသိရှိပါလျှက်မတားဆီးခဲ့သဖြင့်ပြည်သူလူထု့ပေါင်းများ စွာသေကြေပြီးအိုးအိမ်များ၊ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များများစွာပျက်စီဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီးယနေတိုင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမယုံကြည်ကြအောင်၊ဆက်သွယ်မှုမပြုလုပ်ကြရအောင်၊ဈေးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူခြင်းမပြုကြအောင်ပြုလုပ်နေကြသည်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတွေ့မြင်နေကြရပါသည်။
ခံနေပါသော်လည်း ၊ ဒါဘာသာရေးပဋိပခမဟုတ် သာမန်မတော်တဆမှုဆိုကာ နိုင်ငံတော်အာဏာရှင်များဖက်မှလည်း ထိုအစွန်းရောက်မှုကို မသိဟန်ပြုလျှက်၊ သတင်းများကိုဖုံးဖိလျှက်တင်ပြမှုများကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပြီး ၊ တိုင်းရင်းသား
ဘာသာခြားများသေကြေပျက်စီးခြင်းမီးရှိုခံရခြင်းစသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပွါးပါလျှက် ထိုပြဿနာကိုဘာမှမဟုတ်သယောင်ဖြင့်သတင်းအမှန်ကိုဖုံးဖိလိမ်ညာပြောကြားကာ လက်တွေ့တွင် ပြည်သူလူထုမှာအမိုးအကာမရှိသော ရွာအပြင်ဖက်တွင် ထောင်သား များကဲ့သို့ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်နေထိုင်နေကြရသည်မှာပြည်သူလူထုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်ငံတကာမှသိရှိပြီးစာနာမှုအကူအညီများပေးနေပါသော်လည်း မစာနာနိုင်သည်မှာသက်ဆိုင်ရာတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတကာမှဒုက္ခသည်များအတွက်ပေးလှူသောအလှူငွေများကိုမိမိတို့အိပ်ထဲရောက်အောင်နည်းမျိုးစုံဖြင့်လှည်ဖြားရယူ နေသည်မှာဝမ်းနည်းဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုသတ္တမအကြိမ်ကျင်းပသောနိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာဝန်ဆောင်မှုအထူးအစည်းအ ဝေးတွင် ဆရာတော်ကဆက်လက်၍မိန့်ကြားရာတွင်ယခုအခါအချိုသော
ရှင်ငယ် ။ရဟန်းငယ်များသည် သမဏသာရုပ္ပမဖြစ်သည့်အမှုများ၊အကြမ်ဖက်မှုများ၊
အရှည်မျှော်တွေးပြီး သာသနာပြုစိတ်အရင်းခံကာ ရှင်းလင်းသုပ်သင်ဆောင်ရွက်
အဓမ၀ါဒီ၊အ၀ိန၀ါဒီများကိုမတားဆီး နိုင်ပါက အဆိုပါဝါဒများပိုမိုထွန်းကားလာ
ထိုဖြစ်စဉ်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာ မှ ဒလိုင်းလာမားကဲ့သို့သောနိုဘယ်ဆုရှင်
ဆရာတော်များကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရှိ ရဟန်းရှင်များသည် ဗုဒ္ဓ၏မေတ္တာတရားကို
ပြီးရွှေည၀ါဆရာတော်ကလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် ၊အမျိုးသားရေလုပ်ချင်လျှင်
မြန်မာဘုန်းကြီး ၀ီရသူကိုပင် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်သမားမျက်နှာဟု့ခေါင်းကြီး
တပ်ကာဓါတ်ပုံများဖြင့် TIME သတင်းစာကပင်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအလယ်တွင်
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကို မျက်နှာပျက်စေခဲ့သည်ကို သတိတရားရှိစွာဖြင့် ­­အားလုံးမှဝိုင်း
၀န်ထ်ိမ်းသိမ်းကြမှသာ ကမ္ဘာအလယ်တွင် မြန်မာတို့၏ အေးချမ်းသိမ်မွေသော
လူသားချင်းစာနာသနားတတ်သော၊ အေးအတူပူအမှနေထိုင်ကြသော ဗုဒ္ဓ၏
ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ပါရန်အတွက် လူသားတိုင်းမှ အမှန်တရားကိုလေးစား
စားပြီး မမှန်တရားကိုဟောကြားနေသူများကို ၀ိုင်းဝန်းတွန်းလှန်တိုက်ဖျက်သွား
နိုင်ပါမှ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားစစ် တရားမှန်များပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် တိုက်တွန်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
About sai saimg
sai saimg has written4post in this Website..
View all posts by sai saimg →
ဘယ်ဘာသာမဆို အစွန်းရောက်ယင် ဆန့်ကျင်တယ်ဗျို့……
ပိုစ့် နာမည်ပေးပုံကြီး ကြည့်ကြည့်ပြီး ချဉ်လိုက်တာဗျာ
သွားတွေ ကျိန်းနေပြီ ။
အမှန်တော့ ဒီလို သတင်းတွေ မဖတ်ချင်တော့တာ အမှန်. . . .
အလွန် အကျိုးများတဲ့ ပို့ စ်ပါ..
ရ ၇က် သားသမီး ဒကာ.ဒကာမတွေကပ်တဲ့ ဆွမ်းကို အသိတရားနဲ့ ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ရဟန်းတွေ နောက်ထပ် အများကြီး
ပေါ်ထွန်းလာပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်..။
ဟိတ်ရောင် မာမွတ်ရှာပွတ်…. သဘာပတိဆရာတော်ပြောတာကို နင့်အာဘော်နဲ့ ရောမချနဲ့လကွာ… သီးခြားစီရေးတင်မှပေါ့… ငါလခွီး.. ပန်းသေးတရုတ်မ ကြေးအိုးဂို အမဲသားနဲ့ ပြုတ်စားသလိုဖြစ်နေပြီ..
ဒီလို ပို့စ်မျိုးကတော့ ဖွဘုတ်မှာ ရှားပါးရတနာပဲဂျို့